onlineakhabar.com: सावधान !! कतै तपाईले पनि यहि कम्पनीको लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुभएको त छैन
Amazing News, Amazing World, health Tips, International, Main News » सावधान !! कतै तपाईले पनि यहि कम्पनीको लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुभएको त छैन
सावधान !! कतै तपाईले पनि यहि कम्पनीको लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुभएको त छैन
एक महिलाले राम्रो बन्नको लागि लिपिस्टिक लगाइन् तर नतिजा उल्टो भयो । लिपस्टिक लगाएपछि उनको ओठ झन नराम्रो र डरलाग्दो देखियो । फ्लोरिडाको अाएरल्याण्डमा बस्ने लिली क्लियोपेट्रा मौरिस हालै भालमार्ट गइन् र उनले कभरगर्ल ब्राण्डको क्लिन कलेक्शनको लिपस्टिक खरिद गरिन्। तर पहिलो दिनमै त्यसलाई ओठमा लगाइन् र सुतिन् । जब उनी बिहान उठिन् तब उनको ओठ सुन्नीएर निकै डरलाग्दो देखिएको थियो ।
लिपस्टिक लगाएपछि सुन्निएको ओठ सहितको आफ्नो फोटो सामाजिक संजालमा राख्दै संभावित एलर्जीको लागि अन्यलाई समेत सचेत गराइन् । उक्त फोटोको साथमा उनि लेख्छिन् ' प्लीज क्लिन कलेक्शन कभरगर्ल लिपस्टिकलाई लिएर सबैजना सचेत रहनुहोस् । यो हप्ता खरिद गरेको लिपस्टिक लगाएर सुतेको थिए तर नराम्रो सँग सुन्नीएको ओठको साथमा मेरो निन्द्रा खुलेको थियो । मलाई तुरुन्त अस्पताल जान परेको थियो । म निन्द्रामै मर्न पनि सक्नेथिए ।'
आफ्नो यो पोस्टको साथमा उनले आफ्नो सुन्निएको ओठको फोटो राखेकी छन् । जुन फोटो उनले अस्पतालमा खिचेकी हुन् । यो पोस्टलाई अहिले सम्म ६० हजार भन्दा धेरैले शेयर गरिसकेका छन् ।
कभरगर्ल कम्युनिकेशन्सका लारा ब्रिंकर भन्छन् 'जब हामीहरुलाई यो महिलाको बारेमा थाहा भयो निश्चित रुपले लिपस्टिकको प्रयोगले भएको होइन, हामीहरुले उक्त महिलालाई सम्पर्क गरेका छौ । खासमा के भएको छ जान्ने छौ र हामीले उनलाई मद्दत पनि गर्नेछौ ।'
Tags : Amazing News Amazing World health Tips International Main News